Imvelaphi yeTheydidi yexesha eliPhezulu
Ngaba uyazi ukuba ngubani ochazwe itafile yexesha lokuqala lezinto eziququzelele izinto ngokunyusa ubunzima be-athomu kwaye ngokwemiqathango yezakhiwo zabo?
Ukuba uphendule "UDmitri Mendeleev" ngoko unokungalunganga. Umqambi wangempela wetafile yexesha eliqhelekileyo ngumntu ongenqabile ukukhankanywa kwiincwadi zembali zekhemistry: de Chancourtois.
Imbali yeThebula lexesha eliPhezulu
Uninzi lwabantu bacinga ukuba iMendeleev yaqulunqa itheyibhile yexesha elikhoyo.
UDmitri Mendeleev wabonisa ithala lakhe lexesha leenkalo ngokusekelwe ekunyuseni ubunzima be-athomu ngoMatshi 6, 1869, kwintetho kwiRashik Chemical Society. Nangona itheyibhile ye-Mendeleev yaba ngowokuqala ukufumana ukwamkelwa kwenzululwazi, kwakungeyona yetafile yokuqala yohlobo lwayo.
Ezinye izinto zaziwa kwixesha elidala, njengegolide, isulfure kunye nekhabhoni. Izazi zeemvelaphi zaqala ukufumanisa kwaye zichonge izinto ezintsha kwiXesha le-17. Ekuqaleni kwekhulu le-19, kwakunezinto ezingama-47 ezazifunyenwe, ukubonelela ngeenkcukacha ezaneleyo zamachiza ukuqala ukubona iipateni. UJohn Newlands wayepapashe uMthetho wakhe we-Octaves ngo-1865. UMthetho we-Octaves wawunamacandelo amabini kwibhokisi enye kwaye akazange avumele indawo yezinto ezingabonakaliyo , ngoko ke wagxekwa kwaye akafumananga.
Kunyaka ongaphambili (ngo-1864) uLothar Meyer wapapasha iitheyibhile zexesha eliye lachaza ukufakwa kwezinto ezingama-28.
Itheyibhile yexesha leMeyer yalela ukuba izinto zibe ngamacandelo ahlelwe ngokulandelelaniswa kwezilingo zabo zee-athomu. Itheyibhile yakhe yexesha elihle yalungiselela izinto zibe ziintsapho ezintandathu ngokubhekiselele kwi-valence yazo, eyayiyimizamo yokuqala yokubeka izicwangciso ngokwemihlaba.
Ngelixa abantu abaninzi bayazi ukuba negalelo likaMeyer ekuqondeni kwenkcazelo yexesha kunye nokuphuhliswa kwitheyibhile yexesha, abaninzi abazange bakuve ngo- Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois .
UDe Chancourtois wayengusosayensi wokuqala ukuba ahlele amacandelo eekhemikhali ngokulandelelana kwezilingo zabo zee-athomu. Ngowe-1862 (iminyaka emihlanu ngaphambi kweMendeleev), u-Chancourtois wanikeza iphepha elichaza indlela awayeyilungiselele ngayo i-Academy of Sciences yesiFulentshi. Eli phepha lishicilelwe kwiphephancwadi le-Academy, i- Comptes Rendus , kodwa ngaphandle kwetafile yangempela. Itheyibhile yenkcazo yavela kwipapasho ethile, kodwa yayingafundwa ngokubanzi njengoko iphephandaba lika-Academy. UDe Chancourtois wayengumgogolo wegoloji kwaye iphepha lakhe libhekiselele kwiingcamango zengqondo, ngoko ke itheyibhile yakhe yangexesha ayifumananga ngqalelo kwiikhemists zolu suku.
Ukwahluka kwiTable Table Modern
Bobabini baseCancourtois kunye noMendeleev bahlela izinto ngokunyusa ubunzima be-athomu. Oku kunengqiqo, kuba isakhiwo se-athomu sasingaqondakali ngexesha, ngoko ke iingcamango zeeproton kunye ne-isotop ayengasichazwa. Itheyibhile yexesha lemihla iyalawula iimeko ngokuhambelana nenani le-athomu kunokunyusa ubunzima be-athomu. Ngokona nxalenye ininzi, oku akutshintshi umyalelo wezinto, kodwa kubaluleke kakhulu phakathi kwamatafula asekudala kunye namanje. Iitheyibhuli zangaphambili ziyiyureyibrari yexesha eliqhelekileyo njengoko iqokelele izinto ngokuhambelana nexesha leempahla zabo zamakhemikhali kunye nemvelo .
Itheyibhile yezinto ezixhamlayo zezinto eziqhelekileyo
Isingeniso kwi-Chemical Elements
UStephen King ii-Movies kunye neMiboniso yeTV
Isingeniso kwiMfazwe yaseVietnam
2009 PPV Iziphumo & Recaps
Ngubani uMarcel Breuer, uBauhaus Protege?
IsiFrentshi ISigama Isifundo: Ibhanki nemali
Ngaba Kuye Kwaye Kuyehluka?
Izizathu Ezifanelekileyo Zokufunda Uqoqosho
Indlela yokubhala iNgxelo yeFilosophy yezemfundo
Indlela Yokuthatha Amanqaku
Inkcazo Ion Definition